सरकारले बर्खास्त गरेपछि टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी के भन्छिन् ? | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← पोखरामा अर्को बन्जी जम्प सञ्चालनमा आउने
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको तथ्यांक पनि राखिँदै, बन्यो अनलाइन सिस्टम →
काठमाडौँ, २९ साउन । नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले आफूलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय अन्यायपूर्ण भएको बताएकी छिन् । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बेलुकीको बैठकले राजभण्डारीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै दैनिक नेपालसँग कुरा गर्दै राजभण्डारीले भनिन्, ‘मलाई अन्याय भयो । निर्दोषलाई दोषी बनाउँदा दुःख लाग्दो रहेछ ।’ उनले भनिन् -‘कम्पनी फुलगेरमा दौडिरहेको छ । तर, काम हुँदाहुँदै पनि भएन भनेर हटाउनु कत्तिको जायज होला ? मेरो कार्यकालमा महत्वपूर्ण काम भएका छन् । कतिपय अहिले हुने प्रक्रियामा छन् ।’
नेपाल टेलिकमको इतिहासमै पहिलोपटक राजभण्डारी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रबन्ध निर्देशक छानिएकी थिइन् । उनी टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बन्ने पहिलो महिला पनि हुन् । २०७३ आश्विन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई तीन बर्षका लागि प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । तर, दुई बर्ष पनि कार्यकाल नसकिँदै उनको पद गुमेको छ ।
वर्तमान सरकारले उनलाई गत जेठ ३० गते ११ वटा बुँदासहित स्पष्टीकरण सोधेको यिथो । ‘राजश्व घ्टयो, राम्रो काम भएन, भनेर स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । मैले स्पष्टीकरण बुझाएपछि ६ ६ महिनामा प्रगति विवरण दिनुस् भन्ने निर्देशन प्राप्त भएको छ । तर, दुई महिना नबित्दै पदबाट हटाइयो ‘ – उनले भनिन्।
राजभण्डारीले टेलिकमको राजश्व र ग्राहक संख्यामा पनि बृद्धि भएको बताइन् । ‘५ बर्षदेखि हुन नसकेको आयोजना मैले सम्पन गरेँ । फोरजी सेवाका लागि ग्लोबल टेण्डरको काम भइरहेको छ ।, उनले दैनिक नेपालसँग भनिन् -‘मध्य पहाडी राजमार्गमा अप्लिटकल फाइबर बिछ्याउने काम पनि अगाडि बढेको छ । अनेक अप्ठेराका बीचमा पनि मैले कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी धेरै काम गरेको छु । तर, मलाई नै हटाइयो ।’
अदालतमा जानु हुन्छ कि हुन्न ? भन्ने दैनिक नेपालको प्रश्नमा कामिनीले छिट्टै निर्णयमा पुग्ने बताइन् ।(दैनिक )